Fitantanana ny haran-dranomasina Reef Resilience
Ny fitantanana mahomby amin'ny fisotroan-jaton'ny vatohara dia afaka manome mivantana mivantana ny tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena toy ny fiarovana ara-tsakafo, ny fampiofanana bebe kokoa, ary ny fivelomana maharitra amin'ny fisarihana mpandray anjara.
Ny fitantanana ny haran-dranomasin'ny haran-dranomasina ihany koa dia manampy mivantana amin'ny fahasalamana ankapobe amin'ny haran-dranomasina, izay manampy amin'ny fihazonana azy tolotra ecosystem toy ny fizahan-tany, misokatra amin'ny varavarankely vaovaofiarovana ny moron-dranomasina, ary ireo soatoavina ara-kolontsaina hafa.
Ireo mpanarato avy ao amin'ny tanànan'i Malem gillnet manjono eny amin'ny harambato eny amin'ny onjam-pahaverezana eo anoloan'ny tanàna. Sary © Nick Hall
Ny tetik'asa fitantanana ny fanjonoana dia manome fepetra manokana mba hahatratrarana ny tanjona ara-tontolo iainana, ara-toe-karena ary ara-tsosialin'ny fisian'ny fisaka. Ny fampivoarana tetik'ady fitantanana ho an'ny haran-dranomasina momba ny vatohara dia ahitana singa maromaro ao anatin'izany: bola, fitaovana fitantanana fanjonoana, ary fanaraha-maso sy fampiharana.